Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa bilaabay sanadka cusub ee 2021 iyagoo ku dadaalaya inay noqdaan gooldhaliyaal taariikhda kubada cagta, kana sare mara kuwii ka horeeyay isla markaana dhigay rikoor iyaga u gaar ah.
Weeraryahanka kooxda Juventus Ronaldo ayaa ku sii dhawaanaya halyeeyada reer Brazil ee Ronaldo iyo Pele, halka Lionel Messi uu sidoo kale aad uga dambeeyo.
Sanadkii 2020, Ronaldo wuxuu ahaa laacibkii labaad ee abid abid xulka qarankiisa u dhaliya, Portugal-na waxay saxiixday 102 gool, halka Lionel Messi rikoorkiisii ​​ugu dambeeyay ee Pele goolkiisa hal koox uu ka dhigto midkiisii ​​ugu horreeyay ee Pele oo waqtiga Santos uu dhaliyay 643 gool.
Intii lagu jiray usbuucii ugu horreeyay ee bishii Diseembar, Ronaldo wuxuu dhaliyay goolkiisii ​​750-aad ee xirfadiisa ciyaareed heer kooxeed iyo heer kooxeed Dynamo Kiev wareega group-yada Champions League.
Lionel Messi ayaa dhankiisa noqday xiddigii 7-aad ee 700 iyo wax ka badan ka dhaliya dalka iyo kooxdaba.
Labadan xiddig, kuwaas oo adduunka xukumayay 15-kii sano ee la soo dhaafay isla markaana dhigay rikoorro aan caadi ahayn, ayaa hadda lagu wadaa in loo qoro gooldhalinta taariikhda kubadda cagta.
Xiddiga reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa haatan ah ciyaaryahanka afaraad ee ugu goolasha badan abid, isagoo ka horreeya seddex ciyaaryahan oo uu hubo inuu qaban doono haddii uusan ku dhicin aafada.
Lionel Messi (sawirka midig) waa ciyaaryahanka toddobaad ee ugu goolasha badan adduunka, sida Ronaldo oo kale, wuxuu fursad u heystaa inuu jabiyo rikoorka goolasha ugu badan wax ka yar seddex sano.
Waa kuwan 10-ka gool dhaliye iyo halka ay joogaan Ronaldo & Messi:
10. Tulio Maravilha – Brazil
575 gool – 1988-2019
9, Uwe Seeler – Jarmalka
575 gool – 1953-1978
8. Ferenc Deak – Gaajo
576 – 1940-1957
7. Lionel Messi – Argentina
717 gool 893 kulan – 2003 – ilaa iyo haatan
6. Gerd Muller – Jarmalka
734 gool 793 kulan – 1962-1981
5. Ferenc Puskas – gaajo
746 gool 754 kulan – 1943-1966
759 gool 1034 kulan – 2001 – ilaa iyo haatan
3. Pele – Brazil
767 gool – 831 kulan – 1957-1977
Romario – Baraasiil
772 gool 994 kulan – 1985-2007
1. Josef Bican – Ruushka
805 gool 530 kulan – 1931-1956
Albert Mabri Toikeusse gave the impression